हरेक दिनको आफ्नै विशेषता छ, यी काम गर्दा शुभ मानिने दिनहरू ! जानी राखौ | newdnn.com
हरेक दिनको आफ्नै विशेषता छ, यी काम गर्दा शुभ मानिने दिनहरू ! जानी राखौ
२०,सोमबार ०२:०७ Sangita Rai
हरेक दिनको आ–आफ्नै महत्व हुन्छ । हरेक दिनको आफ्नै विशेषता छ । सबै दिनको उत्तिकै महत्व भएपनि हरेक कामका लागि सबै दिन शुभ मानिदैन । कुन दिन के काम गर्नु शुभ हुन्छ भनी धेरैमा जिज्ञासा रहन्छ ।
बोटटबिरुवा रोप्न, बाली गलाउन, कलात्मक कार्य गर्न, पशुपालनसँग जोडिएको काम गर्न, वस्त्र धारण गर्न, रत्न र आभूषण लगाउन, कामवासना पूरा गर्न, चिन्तन र मनन गर्न पनि यो दिन शुभ हुन्छ । पूर्व दिशाबाहेक अन्य दिशातर्फको यात्रा गर्नु शुभ हुन्छ । नेपाली समाजमा सोमबार भने नयाँ वस्त्र धारण गर्ने प्रचलन छैन ।